Home » Fifanarahana tapakila » Jumper T18 2.4G 868 / 915MHz 16CH Hall Sensor Gimbal OpenTX Multi-protocol Transmitter JP5IN1 RF Module ho an'ny RC Drone - Mode 1 (Throttle tanana ankavanana)
Jumper T18 2.4G 868 / 915MHz 16CH Hall Sensor Gimbal OpenTX Multi-protocol Transmitter JP5IN1 RF Module ho an'ny RC Drone - Mode 1 (Throttle tanana ankavanana)
PRICE COUPON: 🇺🇸 $144 = 🇪🇺 122 €
- Jumper Offers jereo - ETO
Jumper T18 2.4G 868 / 915MHz 16CH Hall Sensor Gimbal OpenTX Multi-protocol Transmitter JP5IN1 RF Module ho an'ny RC Drone
Ny Jumper T18 dia mitondra ny fiasa tsara indrindra amin'ny andiany T16 ary nanatsara ny modely JP4IN1 ho JP5IN1. Radio iray mifehy bebe kokoa!
Jumper mifantoka amin'ny fanomezana fitaovana mifanaraka amin'ny tetikasa loharano misokatra isan-karazany. Miezaka hatrany izahay mitondra vokatra tsara kokoa.
Mitady radio afaka mifehy ny halavirana? Tsy mila modely mavesatra mifatotra amin'ny radio? Afaka mahazo T18 ianao izao!
Ny Jumper T18 dia manana modely multi-protokol an'ny JP5IN1, miaraka amin'ny 2.4G JP4IN1 sy 915mhz / 868mhz miaraka amin'izay.
Miaraka amin'ny T18 dia azonao atao ny mifehy ny quads mini-sy ny fiaramanidinao amin'ny fotoana tsy misy modely fanampiny miraikitra.
Ankoatra ny JP5IN1, ny T18 dia manana jiro miverina LED azo ovaina. Kitendry herinaratra roa hahazoana antoka fa afaka mamono ny radio haingana ianao. Gimbal sensor ALPS RDC90 malefaka (T18 Pro ihany). Ny mahay mandanjalanja ny tady vozona dia afaka manamaivana ny lanjan-tenda… Ary maro hafa.
Size: 180 * 190 * 58 MM
Lanja: 888g (tsy misy bateria)
Volta miasa: DC7-8.4V
Fantsona: fantsona hatramin'ny 32 (miankina amin'ny mpandray)
Simulator mode: 3.5mm standard ppm output na USB HID
Asehoy: IPS480 * 272 (800 * 480 HD IPS touch interface interface voatahiry - andrasana ho tohanan'ny openTX2.4 sy ambony)
Ny modely JP5-in-1 Multi-protokol dia nahitana ny R9, DSM2 / X, FrSky, SFHSS, FlySky, FlySky AFHDS2A, Hubsan ary maro hafa
Ny CRSF dia azo asiana amin'ny bay JR ao aoriany toa ny T16 ihany
Firmware firmware OpenTX
Anisan'izany ny raharaha Zipper
Jiro LED azo ovaina
Asa fampahatsiahivana hovitrovitra
Fanavaozana ny firmware amin'ny Internet USB-C
JR / FrSKY mifanentana mody amin'ny sisiny aoriana.
Module JP5IN1 - 2.4G JP4IN1 sy 915mhz / 868mhz
Buttons 6-Flight Mode (ho an'ny mpanamory sidina APM sy Pixhawk)
Tohano ny telemetry (miankina amin'ny mpandray)
Hatramin'ny fantsom-pifandraisana 16 (azo hitarina ho 32ch, miankina amin'ny mpandray)
1 x Fehin-kibo Orange Jumper
Raharaha mitondra Zipper
Hazavana azo averina
[Stock EU - CZ] BlitzWolf BW-AS3 70W 12000mAh Wireless Speaker miaraka amin'ny 360 ° Stereo Sound, TWS Function, Designing Styling, NFC Function
Ampiasao Coupon Code:BGCZPL3
Eachine EAT10 1/18 Brushing RC Car miaraka amin'ny 2.4GHz Remote Control Haingam-pandeha 28km / h 4WD Off Road Monster Truck RC Model Vehicle Crawler ho an'ny Ankizy Ankizy sy ny olon-dehibe - mavokely
Ampiasao Coupon Code:BG0622919
[Stock stock EU - CZ] 44.99 forEachine EBT02 RC Boat Remote Control Boat ho an'ny pisinina sy farihy Fast RC Boats miaraka amin'ny 15+ mph Speed ​​4 Channel 2.4GHZ Remote Control Turnover Reset Function ary bateria azo averina ho an'ny zazalahy kely sy zazavavy
Ampiasao Coupon Code:BG0621119
Sarin-tsarintany lehibe mihantona an'izao tontolo izao azo aforitra lamba tsy vita tenona an-damban-drindrina rindrina eran-tany haingon-trano Poster trano fandraisam-bahiny Sekolin'ny efitrano fandraisam-bahiny - 60x90cm
Ampiasao Coupon Code:BG022aa4